July Dream: The ten heads
Posted by JulyDream at 7:31 PM
ကိုင်း.. ကိုယ်ယောင်ဖွင့်ပြလိုက်မယ် လာလေရော့.. အပ်ချလောင်းးးးး။ တွေ့ပြီလား Young Gun ကို။ ဟဲဟဲ။ ဟယ်ရီပေါ်တာကို လေလျှော့ထားတဲ့ မျက်နှာပေးလေးဟာ သေနတ်ကလေးရဲ့ မျက်နှာပေးနဲ့ နီးစပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ ဓမ္မာသောက အင်းဝရာဇာ အကြောင်း ဒေတာစုံတာနဲ့ ရေးတော့ပါမယ် အစ်ကိုကြီးရေ။
မယုံရင် ချစ်သူလေးကို မေးကြည့် ဆိုပဲ။
တွေ့ချင်တဲ့လူ ၁၀ ယောက်ရေးတာမှာတောင် ချစ်သူလေးကို မရရအောင် ဆွဲထည့်သေးသကိုး။
သူ့မှာ ဒီစိတ်ပဲ ရှိတော့တယ် ထင်ပါရဲ့။
ကို July Dream က နောက်ခံပေါင်းစုံက လာတဲ့ ဘလော့ဂါတွေနဲ့ ခင်တယ်ဆိုတော့ Multi-culture ကို သဘောပေါက်သူ တယောက်ဖြစ်မှာ သေချာပါတယ်။
တွေ့ချင်သူတွေအားလုံးနဲ့ တွေ့ဆုံနိုင်ပါစေ ..ကို ဂျူလိုင်
ကြောသား ရင်သား မခွဲခြားဘူးတဲ့။ မယုံရင် ကျနော့်ချစ်သူမေးတဲ့။ သူလူတိုင်းကို ချစ်သူလေးလို သဘောထားတယ် ပြောနေတယ်။
အင်.... တားတားဂိုကျတော့ တွေ့ချိဖူး ထင်ပါ့
မောင်ကလေး ကိုဂျူလိုင် မမဆုမွန် လာဖတ်သွားတယ်..အရောင်ကို ပြောင်းဖို့တော့ လုပ်နေတယ်ကွယ် ပစ်ရမှာလဲ ၀င်းဝင်း နဲ့ ရှပ်ရှပ်ဖြစ်နေလို့...မြင်ချင်ရင် ဘန်ကောက်လာခဲ့ ရောင်စုံ တိုက်ပွဲတွေထဲ ခေါ်သွားပေးမယ်နော်
ကိုဂျူလိုင်။ ကြော်ငြာတွေ များနေပြီ။ ဟဲဟဲ။
သူ့ကို လူကြမ်းအကယ်ဒမီ ကြေငြာမိကာမှ
ကိုယ့်ကို ပြန်ပြီး မင်းသားလုပ်ခိုင်းနေတယ်။
နောက်ပြီး မင်းသမီးလည်းပါဘူး။ တစ်ယောက်တည်း...
ဗြဲ. ဗြဲ.. ဗြဲ...
kom: လာလည်လို့ ပြန်လာလည်တာ မဟုတ်. လာမလို့ စိတ်ကူးတုံးရောက်လာလို့ အခန့်သင်က ဖြစ်သွားဒ.ယ်
30 Apr 09, 12:11
kom: ကိုဂျူလိုင်ကတော့ ဘီးဇှီးလို့ ဂျီေတာ့မှာပြရင်လည်း တို့ကတော့ခေါ်မှာဘဲ။
kom: ခင်မင်းဇော်က ပီအေ ထက်လှတယ်အေ့ မယဲူရင် သွားကြည့်ချည် ကိုးရီးယားကားက မင်းသမီးလိုဘဲ။
30 Apr 09, 12:10
kom: တို့ကတော့ဆိုးသွမ်းလိုမဟုတ်. မိန်းမယူမယ်ဆိုရင် ဆေငာင်ရန် ရှောင်ရန်တွေ ကို သြဝါဒပေးနိုင်ပါတယ်။ တို့ကတော့ မိုးချိူသင်း ကွန်မက်ထဲရေးချင်တာ သွားရေးတာဘဲ သူကမှ စီပုံးမပေးတာ ရေးမှာဘဲ။
30 Apr 09, 12:09
kom: ကလူသစ် သမီးတော့ချစ်သကွယ်။ ရွာသားက အလကလားပါ။ အယ်လဇီဆိုတာ ချောချောလှလှလေးသူမနာလိုလို့ လုပ်ကြံပြောနေတာပါ။ ကေကတော့ လူကိုယ်တိုင်ကကိုလေးတာပါ။ မယုံရင်မေးကြည့်ပါ။ ပေါင် ၁၄၀ လို့ ကြားတကါဘံ။ တို့ကတော့ ဆိုးသွမ်
30 Apr 09, 12:06
kom: လမ်းကြုံတိုင်း ချစ်သူ ပါနေပလား။
kom: ဟုတ်တယ်. အဲဒါကြောင့်တို့လဲမတွေ့ချင်ဘူး. အားမနာပါမနာ ရေးချင်မိတယ။် ဒါပေမဲ့လည်း တစ်ခါတစ်လေတော့လည်း virtual world ထဲကနေ ထွက်ချင်မိတယ်။
presentation အလွန်ကောင်းပါသည်။ ကြော်ငြာ ဖြတ်ဖြတ်ဝင်တာပဲ ဆိုးသည်။